ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion-proof လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
BQC53 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်သံလိုက် စတင်ကိရိယာ
6. ၎င်းကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် သုံးဆင့်သုံးဆင့်ရှဉ့်လှောင်အိမ်မော်တာ၏ စတင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ရှေ့နှင့်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မော်တာဝန်ပိုခြင်း၊ ဗို့အားအောက်၊ ရှော့တိုက်ခြင်းနှင့် အဆင့်ချို့ယွင်းခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ကြိုတင်အဆင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အကာအကွယ်များလည်း ရှိသင့်သည်။
PBb စီးရီး အပြုသဘောဆောင်သောဖိအား ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့
6. အလင်းရောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းများ၏ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ဗဟိုအချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်နှင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့လည်းဖြစ်သည်။
BF28159-gQ စီးရီး ပေါက်ကွဲမှု ဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်သံလိုက် စတင်ကိရိယာ
7. မော်တာ၏တိုက်ရိုက်စတင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်းနှင့် ရှေ့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း၊ ဝန်ပိုခြင်း၊ တိုတောင်းခြင်းနှင့် ဗို့အားကာကွယ်မှုအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ပါ။
BPG စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်
6. အလင်းရောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အဖွင့်အပိတ် ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း။